ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှာဖွေခြင်းအမေးအဖြေများ - WorldRef
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောင်းချခြင်းသည် WorldRef မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခရီးသွားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။
WorldRef သည်သင့်အားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ချက်ချင်းလက်လှမ်းမီစေသည်။ သမားရိုးကျရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနည်းလမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရှိန်အဟုန်မြင့်မား။ တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများသည်စုစုပေါင်းငွေစုစုပေါင်း ၈၀% အထိစုဆောင်းထားကြောင်းသို့မဟုတ်တစ်နည်းအားဖြင့် ၁-၂ နှစ်အတွင်းရောင်းအားနှစ်ဆတိုးလာကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ပိုမိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ.
WorldRef ပလက်ဖောင်းပေါ်မှရောင်းသူများကို "Selling Partners" လို့ခေါ်တယ်။ မြှင့်တင်သောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုရောင်းချသူအား ၁၀၀% ကောက်ခံခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းအပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းကို WorldRef ကကျခံသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာရောင်းချသူများအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်။ WorldRef သည်သဘောတူညီချက်အပြောင်းအလဲတိုင်းအတွက်အမည်ခံအောင်မြင်မှုအခကြေးငွေပေးသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိကုမ္ပဏီတိုင်းထံလက်လှမ်းမီစေရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့စူးစမ်းပါ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ၀ န်ဆောင်မှု ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
အကောက်ခွန်ငွေပေးချေမှုနှင့်ပြန်လည်ပေးချေမှုများအပါအ ၀ င် ၀ ယ်ယူသူစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် WorldRef သည်အဓိကပံ့ပိုးမှုအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ / ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် ၁၀၀% ငွေပေးချေမှုကိုရောင်းချသူမှလက်ခံရရှိသည်အထိရောင်းသူများအား WorldRef အထောက်အပံ့ဖြင့်အာမခံသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးကို WorldRef မှတဆင့်ရောင်းနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ အာရှတစ်လွှားရှိဖွံ့ဖြိုးဆဲစျေးကွက် ၂၀ တွင်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် WorldRef အရောင်းလမ်းကြောင်းများကိုအသုံးပြုပါ။
"တည်နေရာ" နှင့် "ဒေသခံရောက်ရှိခြင်း" ကဘာကိုဆိုလိုသလဲ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့လေ့ကျင့်ထားသည့်နည်းကိုကိုင်တွယ်လိုသည်။ ၎င်းသည်ရောင်းသူအားယုံကြည်မှုပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး၎င်းသည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆိုလိုသည်။ သမားရိုးကျအနေဖြင့်၊ သင်သည်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်အင်အားကိုနိုင်ငံအမျိုးမျိုးတွင်ဖန်တီးရန်အတွက်အချိန်နှင့်ငွေများကိုများစွာသုံးစွဲရမည်။ WorldRef နှင့်အတူ, ငါတို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြီးပါပြီ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောင်းသူများအတွက်မူပိုမိုကောင်းမွန်သောရောင်းဝယ်မှုနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးသောအခမဲ့နှင့်လခပေးသောအစီအစဉ်များရှိသည်။ ဒီမှာအစီအစဉ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သော ဦး ဆောင်မှုနှင့်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုတောင်းခံရန်မတောင်းသော်လည်းသဘောတူညီမှုကိုအောင်မြင်စွာပြောင်းလဲပြီးနောက်အမည်ခံအောင်မြင်မှုအခကြေးငွေကိုကျွန်ုပ်တို့ကောက်ခံပါမည်။ ဤနေရာတွင် "အောင်မြင်သောအခကြေးငွေ" အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
သင်၏နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးခရီးစဉ်များအတွင်းအကူအညီများကိုအဆုံးသတ်ပေးသည့်အထူးအစည်းအဝေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များကိုတန်းစီရန်၊ ဒေသဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲများနှင့်ရောင်းဝယ်မှုပြောင်းလဲခြင်းအထိသင်၏နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ကို ၁၀ ဆပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် WorldRef ကိုမှီခိုအားထားနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ စူးစမ်းပါ စျေးကွက်လည်ပတ်မှုနှင့်အစည်းအဝေးဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ လိုအပ်ချက်တိုင်းအတွက်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်တွေရှိတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအစီအစဉ်နှင့်စျေးနှုန်းကိုဤနေရာတွင်စစ်ဆေးပါ.
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်စျေးနှုန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်များကိုစစ်ဆေးပါ ဒီမှာ.
ရောင်းသူများအတွက်“ end to end support” ဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
အမှာစာများနေရာချထားခြင်းအပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္ end သည်အဆုံးသတ်မသွားပါ။ WorldRef သဘောတူညီချက်မန်နေဂျာများနှင့်အပေါင်းပါများသည်အမိန့်ကိုမပိတ်မှီအထိဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များကြားဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ရောင်းသူများအားစဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့သည်။
မြေပြင်စျေးကွက်သုတေသနကိုရယူပါ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်စကားပြောပါ၊ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ ဤအမှုအလုံးစုံကိုမဖြစ်စလောက်ကုန်ကျစရိတ်မှာ။ စစ်ဆေးပါ နိုင်ငံတကာစျေးကွက်သုတေသနဝန်ဆောင်မှု ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
ရောင်းသူများသည် WorldRef Associate ကွန်ယက်မှမည်သို့အကျိုးရရှိနိုင်သနည်း။
ရောင်းချသူများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းပေါင်း ၃၀ ကျော်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ မှ ၀ ယ်သူများနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သူများကိုချက်ချင်းလက်လှမ်းမီသည်။ ဤသည်မှာ WorldRef နှင့်အလုပ်လုပ်သောထောင်နှင့်ချီသောတွဲဖက်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပျက်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, 100% အခမဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေ့ကြုံခံစား စက်မှုအရင်းအမြစ်ဝန်ဆောင်မှု WorldRef အပေါ်။ တကယ်တော့သင်ဟာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောင်းချသူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအတွက်သင်သုံးစွဲမည့်ငွေနှင့်အရင်းအမြစ်များစွာကိုချွေတာသည်။ သင့်ကို ၀ ယ်ယူသည့်အဖွဲ့အနေဖြင့်အသင့်စောင့်နေရန်စဉ်းစားပါ ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုတောင်းဆိုသည်.
သေချာတာပေါ့၊ အခုဆိုရင်ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာမြင့်မားတဲ့ချွေတာမှုနဲ့ဒေသတွင်းတတိယပါတီစစ်ဆေးရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူပါ။ စစ်ဆေးပါ တတိယပါတီစစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှု ပိုမိုသိရန်။
WorldRef ကို "ရည်ညွှန်းကမ္ဘာကြီး" အဖြစ်သဘောတရားအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာလိုအပ်သောနှင့်စစ်မှန်သောကိုးကားချက်များသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံများရှိသည့်ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အတွေ့အကြုံ၊ ရည်ညွှန်းချက်များ၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုထောက်ခံချက်များ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိစစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်ဘဏ္recordsာရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများစသည့်ကုမ္ပဏီ၏ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုသည့်တင်းကြပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါသည်။
အဲဒီမှာဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုအတော်များများရှိတယ်။ အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သင်ရောင်းချသူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်တိုက်ရိုက်မှာကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင်၊ အပိုပစ္စည်းများနှင့်စံစက်မှုစက်ကိရိယာများကို WorldRef မှတိုက်ရိုက်ရောင်းချပြီးတံခါးကိုရောင်းချသည်။ နေစဉ်, ပိုကြီးပြီးစိတ်ကြိုက်စက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုရောင်းချသူများကတိုက်ရိုက်ပြည့်စုံနေကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ၀ ယ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်မှာယူထားသည့်အတိုင်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုမကုန်မှီတိုင်အောင်သင်သည် WorldRef အာမခံချက်ရှိသည်။ ငါတို့နှင့်စကားပြောပါ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမကြာခဏရောင်းသူများ၏နယ်ပယ်များတွင်ပါဝင်သည်။ သိုမဟုတ်သို့သို့သို့သို့သို့သို့သို့သိုမဟုတ်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှု ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းသူများထံမှ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်ကူညီရန်အထူးဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။ အလည်အပတ် အရေးပေါ်ဝယ်ယူဝန်ဆောင်မှု ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစက်မှုထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေပေးနိုင်သည်။ ၁၀၀၀ ကျော်သော International Associates နှင့်အတည်ပြုပြီးသောရောင်းသူ ၁၅၀၀၀ ကျော်ကသင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းရရန်သေချာစေပါ။ သင့်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ.
WorldRef မှတဆင့် ၀ ယ်ယူခြင်းသည်သမားရိုးကျ ၀ ယ်ခြင်းထက်မည်သို့ပိုကောင်းသနည်း။
ကောင်းပြီ၊ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှစစ်မှန်။ ယုံကြည်ရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့်ရှာဖွေရာတွင်နှင့်သင်၏အချိန်၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေများကိုသင်စုဆောင်းသည်။ ရောင်းသူနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးသည် WorldRef မှအဆုံးသို့အဆုံးအထိအာမခံချက်ဖြင့်လာသည်။ ထို၏ထိပ်ပေါ်မှာ၎င်း၏အခမဲ့!
သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ဖြန့်ဝေမှုအချိန်ပေါ် မူတည်၍ နိုင်ငံခြားအပြင်ပြည်တွင်းမှပေးသွင်းသူများထံမှသင်ရယူနိုင်သည်။ သင်၏နှစ်သက်မှုပေါ် မူတည်၍ ကမ္ဘာအနှံ့မှပေးသွင်းသူများအားကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
စစ်ဆေးခြင်း ဝယ်ယူသူများအတွက် WorldRef မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်.
ကျွန်ုပ်၏မှာကြားမှုပြီးဆုံးသည်အထိကျွန်ုပ်သည် WorldRef မှအကူအညီရယူနိုင်မလား။
ဟုတ်ကဲ့! ရောင်းချသူရွေးချယ်ခြင်း၊ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းများ၊ အမှာစာများနေရာချထားခြင်းများမှသည်သင်၏အမှာစာမကုန်ဆုံးခင်အထိအောင်မြင်စွာပေးပို့နိုင်သည့်အထိ ၀ ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။ အာမခံချက်ကာလအတွင်းနှင့်ပြီးနောက်တွင်သာမက၎င်းသည်ရောင်းအားလွန် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုစာမျက်နှာသို့သွားနိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
မည်သူသည် WorldRef Associate ဖြစ်သနည်း။
မည်သူမဆို WorldRef တွဲဖက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများသည်နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများအဖြစ်ကြီးထွားလာသည်။
အရောင်းတွဲဖက်အဖြစ်ကျွန်ုပ်၏အခန်းကဏ္ & နှင့်တာဝန်များကားအဘယ်နည်း။
ရောင်းသူအဖြစ်သင် ၀ ယ်သူများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းချက်များတင်ပြခြင်း၊ အစည်းအဝေးများတက်ခြင်းနှင့် ၀ ယ်သူနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုပိတ်ခြင်း။ အခြေခံအားဖြင့်သင်ရောင်းသူများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်စစ်မှန်သောအပြိုင်အဆိုင်ကမ်းလှမ်းမှုများရရှိရန်စိတ်မပူပါနှင့်။ များများရောင်းပါ၊ များများရ။ စစ်ဆေးပါ WorldRef အလုပ်လုပ်ပုံ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
တွဲဖက် ၀ ယ်သူအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏တာဝန်များကားအဘယ်နည်း။
တွဲဖက် ၀ ယ်သူအနေနှင့်သင်ပေးသွင်းသူများကိုစီမံရန်တာဝန်ရှိသည်။ ရောင်း ၀ ယ်သူအသစ်များခေါ်ဆောင်ခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်းများပေးပို့ခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းချက်များစုဆောင်းခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ရောင်းချသူမိတ်ဖက်များနှင့်အမှာစာကိုပိတ်ခြင်း များများရောင်းပါ၊ များများရ။ စစ်ဆေးပါ WorldRef အလုပ်လုပ်ပုံ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
Knowledge Associate အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများအားယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားစဉ်တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ချက်များ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အခြားအချက်အလက် (လျှို့ဝှက်မဟုတ်သော) ကိုကျွန်ုပ်တို့အားဝေမျှလိမ့်မည်။ ပိုပြီးရောင်း, ပိုမိုဝင်ငွေ။ စစ်ဆေးပါ WorldRef အလုပ်လုပ်ပုံ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
တစ်စုံတစ် ဦး သည် ၃ ခုစလုံး၊ ရောင်းခြင်း၊ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ဗဟုသုတတွဲဘက်ဖြစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
သေချာပါတယ်။ သင်ငွေပေးချေမှုတစ်ခုတည်း၌ပင်တွဲဖက်အမျိုးအစားတစ်ခုထက်မကသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အောင်မြင်မှုအခကြေးငွေအတူတူပင်အချိုးအစားဖြစ်ရလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးရန် ငါတို့နှင့်စကားပြောပါ.
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာမင်းလိုချင်တဲ့အခန်းကဏ္chooseကိုသေချာရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - သင်သည်စုံစမ်းရေးကိုသာတင်ပြနိုင်ပြီးနောက်ထပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အားပေးရသည့်အောင်မြင်သောအခကြေးငွေမှာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်ပါ ၀ င်မှုအတိုင်းအတာအရကွဲပြားနိုင်သည်။ စစ်ဆေးပါ WorldRef အလုပ်လုပ်ပုံ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်သည် Worldref Associate အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများသည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတ၊ ကွန်ယက်နှင့်ပထဝီအနေအထားကိုအသုံးချနိုင်သည်။ အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်သင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်သင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောမည်သည့်သဘောတူညီချက်ကိုမျှမချိုးဖောက်ဘဲနေလျှင်၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်အဖြစ်သေချာပေါက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
သေချာပါတယ်။ သင်၏လက်ရှိစီးပွားရေးကိုတိုးပွားစေရန်နှင့်ကြီးထွားရန် WorldRef အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်မင်းကမင်းကရေနံဓာတုစက်ရုံကိုမော်တာတွေရောင်းနေတယ်ဆိုပါစို့။ WorldRef နှင့်အတူ၊ သင်ဝယ်ယူသူသည်အခြားတစ်နေရာရာမှအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောထိုကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုသင် စတင်၍ စတင်နိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်သင်၏ပူဇော်သက္ကာများကိုမည်မျှတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုအဆုံးသတ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ငါတို့နှင့်စကားပြောပါ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
Associates အားပေးချေမှုနှစ်မျိုးရှိလိမ့်မည်။ ပေးအပ်ထားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုငွေပေးချေမှုသည်ထို ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များအရသင်၏ငွေတောင်းခံလွှာ / တောင်းဆိုမှုအား ၂ ပတ်အတွင်းပေးချေရမည်။ အောင်မြင်မှုကြေးအတွက်ပေးချေမှုကိုအချိုးအစားအလိုက်တွက်ချက်ရမည်။ WorldRef သည်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်အလားတူတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံသောငွေပေးချေမှုလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ချက်ချင်းပေးလိမ့်မည်။
သင်ရွေးချယ်သည့်အခန်းကဏ္ upon ပေါ် မူတည်၍ WorldRef သည်အောင်မြင်သောသဘောတူညီမှုတိုင်းမှရရှိသောအောင်မြင်မှုနှုန်းကို ၃၀% မှ ၇၀% အထိဝေမျှလိမ့်မည်။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုသင်မိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့အဲဒီကုမ္ပဏီ (၀ ယ်သူဖြစ်စေ၊ ပေးသွင်းသူဖြစ်စေ) နဲ့အနာဂတ်မှာအားလုံးကသင့်အားဖြတ်သန်းသွားမှာပါ။ တွဲဖက်သဘောတူညီချက်နှုန်းအဖြစ်အချို့သောအခြားတိကျသောထည့်သွင်းစဉ်းစားရှိပါတယ်မဟုတ်လျှင်။ ငါတို့နှင့်စကားပြောပါ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ WorldRef ကသင့်ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ပုံမှန်ငွေပေးချေမှုလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းစီအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်သည်။ ယနေ့တွဲဖက်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်!
WorldRef နှင့်ပတ်သက်သောပြုမူဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးကိုထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုသည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ သင်၏အချက်အလက်နှင့်အခြားအချက်အလက်သည် WorldRef တွင် ၁၀၀% လုံခြုံမှုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီသည်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ WorldRef သည်ကျွန်ုပ်အားတွဲဖက်အဖြစ်ကြီးထွားလာရန်မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
အရောင်းတွဲဘက်တစ် ဦး အနေနှင့်သင်၏ကမ်းလှမ်းမှုအစုစုကို WorldRef နှင့်အတူသင်၏နံဘေး၌တိုးချဲ့နိုင်သည်။ အခွင့်အလမ်းသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ၀ ယ်ယူသောထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုရောင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲထုတ်ကုန် ၁ ခုသို့မဟုတ် ၂ ခုရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်အပိုကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲ။ တူညီတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေကမင်းကိုပိုပြီးစီးပွားရေးကောင်းယူလိမ့်မယ်။
WorldRef Associate ပလက်ဖောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒါ“ တော်လှန်ရေးသမား” ကဘာလဲ။
WorldRef Associate ပလက်ဖောင်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီဖြစ်စေဖြစ်စေ ၄ င်းတို့၏လက်ရှိဗဟုသုတနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအသုံးချခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးကိုထုတ်လုပ်နိုင်စေသည်။ WorldRef မှထောက်ပံ့မှုအပြည့်အစုံဖြင့်သင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊ စတင်လုပ်ကိုင်ပါ။
၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်သတ်မှတ်ချက်၏သဘောသဘာဝအပေါ်မူတည်သည်။ ကျေးဇူးပြု သင့်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အမှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်တွေ့လိမ့်မည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူထောင်ပေါင်းများစွာကို WorldRef ပလက်ဖောင်းတွင်ပူးပေါင်းပြီးသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ကမ်းလှမ်းပါ။ ဝန်ဆောင်မှုမိတ်ဖက်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ငါတို့နှင့်ပြောဆိုပါ ပိုမိုသိရန်။
ကျွန်ုပ်သည် WorldRef ထံမှကျွန်ုပ်တောင်းဆိုချက်အတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်ပြန်လည်ဖြေကြားရန်မျှော်လင့်နိုင်သနည်း။
နာရီအနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏သဘောတူညီချက်မန်နေဂျာထံမှသင်တုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏လိုအပ်ချက်အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုသည်တစ်ပတ်မှ ၁ ရက်မှ ၁ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။
ပြိုကွဲနေစဉ်အရေးပေါ်အထောက်အပံ့လိုအပ်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် အမိန့်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ, ကိရိယာများနှင့်စားသုံးရန်အမိန့်ရ post ရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှုထောက်ခံမှု, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုမှု အရေးပေါ်အရင်းအမြစ်ဝန်ဆောင်မှု အပိုပစ္စည်းအမြန်ပေးပို့။
သင်မည်သည့်နေရာတွင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနေပါသနည်း။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ သင့်လိုအပ်ချက်ကိုပြောပြပါအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြင့်သင့်ထံကျွန်ုပ်တို့ပြန်လာပါမည်။
လုံးဝငါတို့ သွင်းကုန် - ပို့ကုန်အကူအညီ ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းသူများအားအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးနှင့်လိုင်စင်အထောက်အပံ့များဖြင့်ပံ့ပိုးမှုအားလုံးကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ သင်ကခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုဖွင့်နိုင်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် WorldRef သည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သနည်း။
WorldRef သည်သင့်အားကမ္ဘာအနှံ့အတည်ပြုပြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုများအရရွေးချယ်စရာများကိုတင်ပြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အာရှတစ်လွှားရှိ WorldRef ၀ န်ဆောင်မှုမိတ်ဖက်ကွန်ယက်ကို အသုံးချ၍ သင်၏ကုန်ချောချည်နှောင်မှုကိုအဆုံးမှအဆုံးအထိတိုးမြှင့်နိုင်သည် သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက် ပျက်စီးနိုင်သောနှင့်မပျက်စီးနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။
သေချာပါတယ်။ သင်သည်ဒေသဆိုင်ရာရုံးကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အချိန်နှင့်ငွေများကုန်စရာမလိုဘဲတိကျသောလုပ်ငန်းတာဝန်များအတွက်လူအင်အားကိုအစားထိုးရန်ခွင့်ပြုသည့်တတိယပါတီလုပ်ခလစာဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့လာလည်ပါ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအင်အားဖြေရှင်းနည်းများ။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည်ငါတို့သုံးနိုင်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးရောက်ရှိခြင်းဝန်ဆောင်မှု လျင်မြန်စွာထုံးစံ၌နိုင်ငံခြား entity တည်ထောင်ရန်။
သမားရိုးကျနည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘယ်ကြောင့် WorldRef မှတစ်ဆင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများတာ ၀ န်ပေးခြင်းသည်ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သနည်း။
ရာနှင့်ချီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုမိတ်ဖက်များမှကမ်းလှမ်းသောတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့်လိုက်လျောညီထွေသောအတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အားသာချက်ကိုရယူနေသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်စေပြီးမြန်ဆန်စေရန်ပြည်တွင်းသာမကကမ္ဘာ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်လက်တွဲပါ။ သင်၏စီမံကိန်းစီမံကိန်းကာလအတွင်းမည်သည့်အရေးကြီးသောဒေသဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုမဆိုဆုံးရှုံးခြင်း၏အန္တရာယ်အချက်ကိုလည်းဖယ်ရှားပေးသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် WorldRef သည်ပို့ကုန်တင်သွင်းမှုအတွက်ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုနည်းလမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အသေးစိတ်အတွက်၊ သင်လည်ပတ်နိုင်သည် ပို့ကုန်တင်သွင်းမှု ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာသို့မဟုတ်ပဲ ငါတို့နှင့်ပြောဆိုပါ.
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး WorldRef ၏အခန်းကဏ္မှာအဘယ်နည်း။
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦး စားပေးမှုများအရယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများစွာမှသင့်အားကမ်းလှမ်းသည်။ သင်သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမပေးမီအထိ WorldRef အထောက်အပံ့ကိုစိတ်ချပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုထွက်စစ်ဆေးပါ ဒေသခံမူဝါဒများ, ကုဒ်များ & စံချိန်စံညွှန်းများ သင်၏စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောဒေသတွင်းသွင်းအားစုများအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။
ရောင်းသူများမှပေးသောထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မည်သို့သေချာစွာသိနိုင်မည်နည်း။
WorldRef သည်သင့်အားယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောရှေ့ပြေးတတိယပါတီစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီများနှင့်အလွတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည် တတိယပါတီစစ်ဆေးခြင်း ဖြေရှင်းနည်းများ။ ဤသည်ကသင့်အားပေးသွင်းသူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကပေးသောအရည်အသွေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးကိုအာမခံသည်။
O&M ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဘာကြောင့် WorldRef ကိုအသုံးပြုသင့်သနည်း။
စီမံကိန်းအတွက်ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ WorldRef ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
သေချာတာပေါ့, ငါတို့စစ်ဆေးပါ စက်မှုအရင်းအမြစ် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုများကိုရယူရန်။
ဒေသခံကန်ထရိုက်တာတစ်ယောက်နှင့်ဆက်ဆံစဉ်ဆက်သွယ်ရေးအတားအဆီးများကိုထိရောက်စွာကျော်လွှားရန် WorldRef ကမည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ဆက်သွယ်ရေးအတားအဆီးအားလုံးကိုကျော်လွှားပါ။ ၄ င်း၏တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ၊ နည်းပညာရေးဆွဲချက်များ၊ ကုမ္ပဏီကတ်တလောက်များ၊ O&M လက်စွဲများနှင့်အခြားများစွာရှိသည့်စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဘာသာပြန်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုရယူပါ။ စစ်ဆေးပါ ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် နိုင်ငံတကာကုန်အမှတ်တံဆိပ် အသေးစိတ်ကို။